सिलिङभन्दा बढीको बजेट ल्याउनुहुँदैनः रामशरण महत | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal
Home राजनीति सिलिङभन्दा बढीको बजेट ल्याउनुहुँदैनः रामशरण महत
६ जेठ, काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ नाघेर बजेट ल्याउन नहुने बताएका छन् । बजेटको आकार बढाएर अर्थतन्त्रले धान्ने नसक्ने बनाउन नहुने उनको भनाइ छ ।
‘बजेट भनेको जसलाई जति मन लाग्यो त्यतिको ल्याउने होइन,’ महतले भने- ‘कतिसम्म क्षमताले धान्छ, त्यतिमात्रै ल्याउनुपर्छ ।’
अहिलेको अवस्थामा ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँको बजेटको आकार नै बढी भएको भन्दै त्यो भन्दा बढी आकारको बजेट नल्याउन सरकारलाई महतले सुझाव दिए । सरकारले भने १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
‘यो अवस्थामा बजेटको आकार बढाउनु भनेको बेलुन फुकाएजस्तो मात्रै हो,’ उनले भने- ‘अन्धाधुन्ध बजेटको आकार बढाउँदा त्यसले मूल्य बढाउँछ । र, महंगीले जनताको ढाड सेक्छ ।’
बजेटको आकार बढाउनु भन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अहिलेको मुख्य सवाल भएको उनको धारणा छ । ‘
बजेट बनाउँदा देशको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको अधिकतम ३० प्रतिशतसम्म मात्रै बनाउनु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । अहिलेको जीडीपीको आकार २२ खर्ब रुपैयाँको हो । १० खर्बको बजेट ल्याउने हो भने त्यो जीडीपीको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ ।
‘जीडीपीको कति प्रतिशत बजेट बनाउने ? कति ऋण लिने ? भनेर सरकार पहिला प्रष्ट हुनुपर्छ’ उनले भने । कूल बजेटमा १७ प्रतिशत राजस्व उठ्ने र जीडीपीको ४ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सकिने उनले जानकारी दिए । महतका अनुसार त्यसबाहेक ९/१० प्रतिशतसम्म वैदेशिक ऋण लिन सकिनेछ ।
खर्च गर्नसक्ने क्षमता नबढाई बजेटको आकारमात्रै बढाउँदा सबैको आँखा त्यसमै पर्ने भएक्ाले लुटतन्त्र हुने उनले बताए । ‘बजेटको आकार बढाएर यसो गर्छु उसो गर्छु भनेर कार्यक्रमहरु ल्याउनु ठूलो कुरा होइन,’ महतले भने- ‘पुँजीगत खर्च बढाउन सक्ने पर्याप्त आधार तयार नपारी बजेटको आकार बढाउनु भनेको जनता झुक्याउने मेलो मात्रै हो ।’
बजेट निर्माण गर्नुअघि पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग छलफल गर्ने चलन छ । तर, अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले विधिवतरुपमा आफूसँग परामर्श नलिएको उनले सुनाए ।
‘एकपटक अर्थमन्त्रीजीले सुझाव माग्नुभएको थियो तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म विधिवतरुपमा छलफल गरेको छैन,’ उनले भने । बजेट आउनुभन्दा २ हप्ताअघि पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग छलफल भएमात्रै त्यो प्रभावकारी हुने उनले बताए ।
‘अन्तिम समयमा छलफल र सुझावका लागि बोलाउनु भनेको औपचारिकता कायम राख्ने मात्रै हो’ उनले भने- ‘सुझाबहरु समेट्ने नियत भए १०/१५ दिन अघि नै छलफल गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’